Yintoni egqithisile, ehamba ngololiwe njenge Nomad iye a lot of nezinye iingenelo. Ufumana ukuba yonke into ngexesha lakho, kunye noololiwe ukukunika ithuba awenze kakuhle ngaphandle les. Isenokuba kancane ngezinye, kodwa akukho ntshikilelo le ndlela zokuhamba, kanti moya i into eyahlukileyo ngokupheleleyo. Ukuba uhamba ngeenqwelo moya, kukho uxinezeleko njalo zisilele izikhululo zeenqwelo kunye namanyathelo yokhuseleko overzealous. Yintoni egqithisile, kwezinye iimeko, uza kufumana oya kuyo ngokukhawuleza xa uthatha uloliwe!
Uyonga kanjani imali xa uQeqesha uKhenketho njengoNomad
imali kakhulu bachitha xa Train Travel njenge Nomad iya ukubhukisha igumbi. kunjalo, ukuba incwadi iihostele, ungonga eninzi imali njengoko kwaye kakhulu efikelelekayo ngaphezu iihotele unyuse namava ongcono ekhumbulekayo ngakumbi. Yintoni egqithisile, xa uhamba wedwa, uyakwazi incwadi naliphi na igumbi nabantu abaninzi kulo, okuyinto ndlela ebiza bhetele. Ke sithembe ukuba, uyakufuna oku kuba oku kuyakuvumela ukuba unxibelelane nabanye abahambi abathanda izinto ezifanayo.
Into elandelayo ke lutshabalalisa imali yakho, kuhle, ukudla. Uyakwazi ukugcina imali ekutyeni ngokulungiselela izidlo zakho ehostele okanye zokuhlala. Uninzi lweehostele kunye neendawo zokuhlala zibonelela ngeekhitshi onokuzisebenzisa simahla. Yintoni egqithisile, enye ithuba Ihostele kukuba ukuphola nabantu nokulungiselela ezinye izidlo ukwabelana.
Ukuhamba ngololiwe ziingcebiso zikaNomad
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi asinike nje ngetyala nge link kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-nomad-europe%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)